Ciidanka xoogga Dalka oo ka warbixiyay howl-gallo ka dhacay Shabeellada dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka xoogga Dalka oo ka warbixiyay howl-gallo ka dhacay Shabeellada dhexe
Ciidanka xoogga Dalka oo ka warbixiyay howl-gallo ka dhacay Shabeellada dhexe
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howl-gallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka fuliyay qeybo ka mid ah Gobolka Shabeellada dhexe.
Taliyaha qeybta 27-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Janeraal , Axmed Maxamed Calasow (Tareedisho) ayaa sheegay in ujeedka howl-galka oo soconayay maalmihii lasoo dhaafay uu ahaa mid lagu doonayay in degaannadaasi looga saaro Kooxda Al-Shabaab.
“Al-Shabaab waa qawaariij waxayna mar walbaba dhibaateeyaan Shacabka Soomaaliyeed, iyagoo hantida shacabka ka dhigtay biil iyo inay Hooyooyinta dhibaataysan dhacaan, taasna waxaan ugu jawaabnay howl-gallo lagu baacsaday cadowga laguna laayay, haddana waa wadi doonnaa Inshaa Allaah, ayuu yiri Taliyuhu.
Taliye Tareedishe ayaa sheegay in ay howl-galka ay ka sameeyeen Sagaal Tuulo oo ay ka mid yihiin Jariirroow, Dhumaleey, Madax Gisi, Saarsaare,Buulo mareereey iyo Gumarreey, isla markaana aysan Argagixisadu samayn wax iska caabbin kana firxadeen goobihii ay Ciidanku gaareen.
Previous articleDhallinyaro hal Abuur Ganacsi cusub ku soo kordhiyay Magaalada Xudur
Next articleWasiirka caddaaladda oo ka hadlay dil uu geystay Askari ka tirsan ilaaladiisa